Warbixin: Maxaad kala socotaa Shabaabka ku dhexjira ciidamada NISA ee fududeeya qaraxyada Muqdisho? – Radio Daljir
Warbixin: Maxaad kala socotaa Shabaabka ku dhexjira ciidamada NISA ee fududeeya qaraxyada Muqdisho?
Maarso 29, 2019 4:10 g 0
Asbuucan sii dhamaanaya waxaa Muqdisho ka dhacay 13 Qarax. Waxaa u dheeraa dilal qorsheysan, waxaana ay aheyd markii ugu horeysay abid oo ay 13 qarax hal asbuuc dhacaan. Sabtidii oo qura ayey 6 qarax dhaceen.
Cidna looma soo qaban qaraxyadaas, mana jirin wax howlgal ah oo ay dowladu sameysay, laakiin waxaa yaableh iney qaraxydaas dhaceen xili wadooyinka Muqdisho inta badan la xiray.
Inta aadan is weydiinin xagee qaraxyada lasoo marsiiyaa jidadka waaba la xiree, waxaa isweydiisa yaa waayay sirdoonka Soomaaliya iyo ciidamada wadooyinka xira?
Sida maanta la isla dhexmarayo Muqdisho waxey gacanta u gashay Al Shabaab labo dhinac ah oo wada shaqeeya. Waxaa jira tuhun xooggan oo ku saabsan in xubnaha Al Shabaab ka soo baxay ee la wareegay hoggaanka NISA iney wali kooxdoodii hore shaqaale u yihiin, mushaarna ka qaataan.
9 kamid ah, 10 ka xubnood ee hadda ugu sareysa NISA waxaa ay ka yimaadeen Al-Shabaab, lamana hubo iney ka tanaasuleen mowqifkoodii hore, iyadoo aan taas la xaqiijin ayaana loo dhiibay xilalkii ugu sareeyay hay’adda sirdoonka iyo nabad sugida Qaranka.
Dadka reer Muqdisho waxey aaminsan yihiin iney labada Shabaab wada shaqeeyaan. Xogo hoose oo la helay ayaa sheegaya in ciidamada waddooyinka xira iney badankooda hoggaamiyaan madax Al-Shabaab ah waxaana askarta lagu amraa iney gaadiidka qaar siidayaan iyadoo aan la baarin.
Cabsi badan ayaa jirta oo sheegeysa in aan waxba laga qaban karin halista amni ee Muqdisho waxaana taas sabab looga dhigay xubnaha Al Shabaab ee la wareegay gacan ku heyntii NISA. Inta uu ka imaanaayo isbadal NISA ka dhaca waxaa la fahamsan yahay in ay qaraxyadu sii socon doonaan.
Mid ka mid saarakiishii hore ee Soomaaliya ayaa laga soo xigta, “hadii midka qaraxa sida iyo midka loo xil saaray inuu qabto ayba hal nin yihiin wax amni la yiraahdo wadankaan lagama sugaayo.”
Farmaajo ayaa dhowr jeer loo sheegay in hay’adii NISA ay gacanta u gashay Al-Shabaab, laakiin weli waxba kama qaban, talooyin cusubna lama soo jeedin illaa iyo hadda.
Hadaba su’aasha iswaydiinta mudan ayaa ah “halkee laga raadinaya amniga magaalada haddii xaalku hadda sidan ku sii socdo?”